WAAYIHII WARSAME Q21AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q21AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q21AAD
Warsame taladii Cabdiwaaxid ayuu qaatay inkasta oo aysan ka dhaadhicin xumaantii uu Cabdiwaaxid sheegay in Muna maagganaan karto. Haddana waxa uu goostay in uu waraaq u qoro Muna uu ugu sheegayo in uu uusan diyaar u ahayn jacaylka ay u soo bandhigtay.
Marka hore iga guddoon salaan ka soo go’day kashka iyo laabta oo kaaga timid walaalkaa Warsame Faarax. Maalmahaan isma aynaan arkin, waxaan filayaa in aad wacan tahay. In aad iskoolka timaadid waan la socdaa oo faylka xaadirinta ardayda ayaan ka arkay inkasta oo aan jeclaa in aan isragno oo wada fariisanno haddana maadaamaa aynaan ishaleelin maalmaha soo Socda imtixaankii aan isku diyaarinayno waxaan go’aansaday in aan waraaqdaan kuu soo qoro.
Gacalo Muna, aad baan kaaga mahadcelinayaa sida ay aad ii qaddarinaysay uguna bareertay in aad ii sheegtid doonistaada. Waxaan qabaa in uu ragga ka nasiib badan yahay ninka adiga nasiib u yeesha in uu jacayl kula jilo oo nolol kula wadaago. In aad aniga ragga iga doortayna waxa ay ii tahay sharaf aan ku faani karo waayo rag badan ayaa ku riyooda in ay hal mar afkaaga ma maqlaan magacooda.
Gacalo Muna, kaliya iima tihid widaayday aan ardo isla nahay ee waxa aad ii tahay walaashay hooyaday dhashay oo kale. Waxaan aanan iloobayn sidii aad ii garab istaagtay markii aabbahay sakaraadayay iyo geeridiisi.
Gacalo Muna, aniga oo aad kaaga mahadcelinaya haddanaa waxaan ka xumahay in aan kugu iraahdo maya.
Ma ahan in aanan kugu qanacsanayn ama aadan dookhayga ahayn ee gacalo Munaay hadda hammigaygu hal meel ayuu ku jeedaa ma na ogi goor uu soo noqon doono ama aan hammigaas ka jiba gaari doono, waxaanse hubaa in aan waddadaas sii hayn doono dhawrka sannadood ee nagu soo aaddan. Todoba sannadood waa muddo dheer ma na sheegi karno meel waayuhu inoo hoggaamin doonaan. Sidaas darteed ma doonayo in aan been kuu sheego oo waqti kaa lumiyo. Waxaad tahay walaashay aan u rajaynaya nolol wacan iyo yegleelidda qoys qurux badan.
Warsame warqaddaas ayuu Muna u qoray waxa uuna u dhexgaliyay waraaqo tijaabooyin ahaa oo laga saxay oo xafiiska loo dhigay in ay ka qaadato.
Muna markii ay warqadda Warsame akhrisay dhulkaa la wareegay hadalkii ayaa ku dhigay wayna u qaadan wayday in Warsame sidaas ugu soo jawaabay waxa ay ka shallayday go’aankeedi waxa ayna nafteeda ku canaanatay in ay degdegtay.
Maalmo kadib warqaddii Warsame wajiga Muna waa laga dareemayay isbeddalka ku dhacay. Saaxiibteed Maryan oo jinniyeheedu neceb yihiin Warsame waxa ay dareentay isbeddalka Muna waana ay waydiisay. Inkasta oo Muna ka warwareegtay in ay xaalkeeda u sheegto Maryan haddana waa ay awoodi wayday in ay saaxiibteed Maryan ka qariso qamuunyada ay uga tagtay warqaddii Warsame.
Muna oo indheheeda illintu ka hibiqleedahay ayay Maryan uga sheekaysay wixii ayada iyo Warsame dhexmaray iyo sidii uu jacda ugu dhajiyay.
Maryan oo aad uga xumaatay waxa saaxiibteed ku dhacay ayaa cay iyo aflagaaddo u dhaadhaamisay Warsame oo ay ku tilmaantay in uu yahay qof aan u qalmin in gabar Muna oo kale uu nolol la wadaago. Maryan waxa kale oo ay Warsame ku sheegtay in uu dhibaaato ku hayo tan iyo markii uu iskoolka shaqada ka bilaabay. Waxa ay ku eedaysay in uu ayada si gaar ah u beegsado oo warbixinno qaldan ka gudbiyo.
Muna oo la yaabtay eedaha Maryan ayaa waydiisay sababta ay mar hore ugu sheegi wayday. Maryan waxa ay ku jawaabtay in ay Muna darteed isaga aamustay ayada oo xaqdhawraysa saaxiibtimada Muna. Maryan waxa ay saaxiibteed Muna kula talisay in ay ninkaas iska hilmaanto. “markii horeba dookhaa kaa qaldamay ee qof kuu qalma ma ahayn,” Ayay tiri.